Induction kuomesa mushonga mushonga, kuoma pasi
musha / Applications / Induction Kurwisa / Induction Kuomesa
Category: Induction Kurwisa Tags: kuomesa, kuomesa kurapwa pamusoro, yakakwirira frequency kuomesa pasi, induction kuomesa pasi, induction kuoma kurapa, induction hardening treatment surface, pamusoro pekuomesa induction
Induction kuoma mabatiro inofarirwa kune zvikamu zvinotarisirwa kutakura zvakanyanya. Zvimwe zvinoshandiswa zvinosanganisira mashizha, mazamu akaona, shafts, stampings, spindles, gears uye zvakasiyana-siyana zvikamu. Kunyuchidzira kuoma kurapwa kunowanzoshandiswa kumativi ekumesa, asi kunogona kushandiswa nedzimwewo zvinhu zvakare.Ukuoma kunowedzera kunopisa zvinhu izvo zvinotonhora pamusoro pe723ºC (kutonhora kwekuchengetedza) uye zvakare kunotonhora simbi nokukurumidza, kazhinji nekudzimwa kwemaindasitiri mvura. Chinangwa chekudzidzira kwekushandisa kwekushongedza kushandiswa kwekushandura chimiro chesimbi kuitira kuti kuwedzere kuoma kwayo, zvibereko zvayo simba, uye kuputsa kwaro. Mafuta ayo anowanzoomeswa nekupisa inotakura inobva ku0.3% kusvika ku0.7% carbon.
induction kuoma kurapa
tine zvizhinji kudzivirirwa kuoma sarudzo munzvimbo dzinotevera:
1. Induction kuoma kurapwa yejini injini dzakadai semagavhu, mashizha, camshafts, hutambo hwekubatanidza uye zvindori zvekutanga
2. Induction kuoma mabatiro yekutumira zvikamu, somuenzaniso CV joints, tulips uye axle shafts
3. Induction kuoma kurapwa yekumiswa kwezvikamu zvakadai sekutyisa zvimiti, zvitubu uye zvigadziridzo zvombo
4. Induction kuoma kurapwa yezvikamu zvezvikwata zvinotsvaga uye mabhuku gear gearboxes, somuenzaniso zvindori, sarudzo ye shafts uye magasi ezuva
5. Induction kuoma kurapwa ye clutch springs uye mabheji pads
Induction kuoma isimbi inopisa inopisa mushonga unopa nzira inogona kudzora uye inogadziriswa yehuni pasina kubatana kunhengo dzesimbi kana zvikamu zvinopisa. Iyo kupisa inoumbwa nokuita kuti magetsi anowedzere muchinhu chinopisa. Izvi zvinopa mari yakanyanya, inotarirwa uye inokurumidza kupisa kupisa kwezvinhu zvinodzidzisa.